Gadoodka Askarta Itobiya & Xadgudubka deegaanka Somaalida” Abiy Ahmed. | ogaden24
Gadoodka Askarta Itobiya & Xadgudubka deegaanka Somaalida” Abiy Ahmed.
Maalin Kahor waa 10-kii October 2018, Wuxuu RW Itobiya Abiy Ahmed la kulmay Qayb ka tirsan ciidamada sida Gaarka ah u Tababara oo sameeyay Gadood ciidan oo si Lama Filaana uga dhacay xarunta madaxtoyada, Waxa la’isweydiinayaa micnaha siyaasadeed ee laga dheehan karo arintaa iyada ah.
Waxa uu R.W Abiy cadeeyey in cabashooyin badani ka jiraan xaga nolosha ciidamada oo ah mushahar la’an, daryeelo xumo iyo saboolnimo ku habsatay ciidamada, wuxuuna Abiy si cad u Qirtay Lacag la’aanta baahsan ee dawladiisa Haysata.
Waxaan se shaaca laga Qaadin diidmada ay diidanyihiin ciidamadu sida loo Maareynayo Heshiisyada ka dheexeeya Dawlada dhexe iyo Xisibiyada diidan in hubka dhigaan” Waa Jabhadihii Hore ee Hubaysnaa.
Arintaasi iyada ah RW Abiy in uu ka hadlo waa ka gaabsaday Laakiiin Waxuu sheegay in Hada dowldiisu diyaar u tahay inay Hubka ka dhigi doonto Jabahadaha soo xeerooday, Si looga dhigabana waanu ka dhigi doonaa Hubka, ayuu Abiy ku celceliyey.
Laba jeer uu carabka ku dhufta arinka Jabahadaha uu baaqa nabadeed ee uu Hub iska dhigida u dirayo waxaa uu magac dhabay OLF, Ginbot 7 iyo Jabhad sadexaad, Marna ma soo Hadal Qaadin ONLF.
ONLF Waa Jabhada ugu da’da weyn Geeska Africa Jabahadihii ka ambaqaaday Hadad isku darto da’da Jabhadihii Soomaalida ee xornimada u Halgamay illaa iyo 1963, Halgakan Soomalida ee Hada ONLF dhaxalkeedii Hayso waxa uu noqonayaa Halganka ugu facweyn aduunka manta la joogo.
Talow R.W. Abiy ma Yasayaa ONLF sida Soomalida iyo Halgankeeda oo dhanba loo Yaso, mise waxa uu Quudareynayaa in ONLF aanay dhib ku hayn dawladiisa? Si kastaba ha ahaatee, doodah ka dhaca Itobiya, koleyba Soomaalidu tixgalin muuqata malaha.
Si kastaba ha ahaatee, waxa hadalada Abiy ku hadlay daka qaarkood soo jiitay mar uu yidhii “cidkasto oo qaynuunka iyo sharciga baal marta Abiyna ha ahaatee waa in maxkamad la horkeenaa.” Su’aashu waxaxy tahay hadaba: tolow RW Abiy sharciga ma baal maray markuu:
(1) Deegaanka Soomaalida werer ku qaatay isagoo wererkaasi la soo gabogabeeyey 4dii August, 2018? Weerarkaas naf iyo duunyo labadaba waa lagu belay.
(2) Tolow sharci ma baal maray markuu Xisbigii Deegaanka ka dhisnaa mudo 25 sano intuu sharci hoosakoodii garaba marey gidi ahaantiiba dumiyey?
(3) Tolow sharicga ma garab marey markii uu Golihii dhexe ee Xisbiga iyo Wasiiradii oo dhan Adis Ababa u soo rarey, dabadeenda si gacan marooris ah Dawlada asagu wato ka dhisay Deegaanka Soomaalida?
Su’aalahaas iyo kuwo kaleba waxay ka Turjumayaan dacwado lagu soo oogi kari lahaa Abiy Hadii Itobiya dal sharici ka shaqeeyo tahay.
Kaliya jawaabta la siin karo R. W. Abiy iyo sida uu ku Andacoonayo Waa waxa xabashidu tidhaahdo markay Arkaan shaqsi waxaan caqliga Galin kula hadlaya, “Hidhinaa Monyihin Faligow,’ ama “war orod oo doqan arimahan kaa dhagaysta raadso.”
Arinta Afgambiga uu Abiy ku sameeyey deegaanka Soomaalida waxay la mid tahay tii uu Xayle Selaasie ku kala Eryey Baarlamankii Ereteria isla markaana daaqada ka tuuray Axdi Hoosaadkii Deeganka Eriteriya xiligaas lahaa markay taariikhdu ahayd September 15, 1952.
Xiligaas waxa kale oo shriweyne Soomaaliyeed lagu Qabtay degmada Xaadow oo (5 kilometer jigjigja u jirta) si looga Tashado dhul wareejinti Ingiriiska iyo Xayle Selaasie wadeen ee ku Aadanaa Haud and Reserved Area.
Taariikhdu wey soo noqnoqotaa, ama, “history repeats itself.
By: Faisal Roble